Update Events – Susan's Wedding Guide (Myanmar) – Wedding Directory and Magazine of Myanmar
Wedding Planing TipsReal WeddingUpdate Eventsဆောင်းပါး အားလုံး
ဟော်တယ်နှင်အစားအသောက်ကျင်းပရာနေရာများပန်းနှင့်ဘောလုံးအလှဆင်လုပ်ငန်းများမိတ်ကပ်ဆရာများဓာတ်ပုံ နှင့် ဗီဒီယို ဝန်ဆောင်မှုများအသေးစိတ်ရှာဖွေရန်
Building A , Room 301, Shwegone Plaza Housing, Shwe Gone Daing Road, Bahan Township, Yangon , Myanmar.
Say Yes at Chatrium Dream Wedding Fair 2020 မင်းအတွက်ဆိုအမြဲ “ Yes”
စာရေးသူ Susan Wedding မှ
မတ် 4, 2020 နေ့တွင်
မြန်မာ၊ ရန်ကုန်၊ မတ်လ ၄ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် Chatrium Hotel Royal Lake Yangon မှ ဦးစီးကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၏ပထမဦးဆုံး Say “ Yes” at Chatrium မင်းအတွက်ဆို အမြဲ “ Yes” Dream Wedding Fait 2020 ကို မတ်လ (၁၄)ရက်နှင့် (၁၅)ရက် ၂၀၂၀ခုနှစ် နံနက်(၁၀)နာရီမှ ည(၇) နာရီ အထိ(၂)ရက်တိုင်တိုင် ဆိုင်ခန်းပေါင်း (၂၀) ကျော်ဖြင့် ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခု Chatrium Dream Wedding Fair 2020 ပွဲကြီးတွင် မကြာခင် ရွှေရောင်နေ့ရက်များကို တူနှစ်ကိုယ်တွဲကာ လျှောက်လှမ်းကြမည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ကန်ရေပြင်ကြီး ဘေးမှာ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနိုင်မည့် ရန်ကုန်မြို့၏ ချစ်ကြည်နူးဖွယ်ရာ အကောင်းဆုံး Wedding Venue ဖြစ်သည့်Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ၏ ထူးခြားဆန်းသစ်သော ပြင်ဆင်မှုများနှင့်အတူ မိမိတို့၏ မင်္ဂလာပွဲအတွက်လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် One-stop Wedding Service၊ ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေး၊ ပန်းအလှဆင်ဝန်ဆောင်မှု၊ မင်္ဂလာခန်းဝင်ပစ္စည်းများ၊ မင်္ဂလာဝတ်စုံများနှင့် သတို့သမီး ဖိနပ်ပြခန်းများ၊ အိမ်ရာအရောင်းပြခန်းများအစရှိသဖြင့် ကဏ္ဍစုံလင်စွာဖြင့် ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၂၀ကျော်မှ အထူးလျှော့ဈေးအစီအစဉ်များဖြင့် ပါဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်များ၊ Talk Show အစီအစဉ်နှင့် Live Music Entertainment Session များဖြင့် မြိုင်ဆိုင်စွာ တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့ ညနေခင်းတွင်လည်း Chatrium Pool Garden ၌ မြန်မာပြည်၏ ထိပ်တန်း Designer များနှင့်Wedding Studio များဖြစ်သည့်Forever One-stop Wedding Service & Planning၊ Designer Thet Hnin Aye (Dozo)၊ Designer May Thu (His &Her Bridal Couture) နှင့် Dior Heart Wedding Studio တို့ မှ အနုပညာရှင်များနှင့်အတူ Stars & Model International မှ အလှမယ်များမှ စင်မြင့်ထက်တွင် ဝင့်ကြွားစွာ တက်ဆက်ပြသသွားမည့်အပြင် နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင်များဖြစ်သည့် ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊ ဂျင်းနီနှင့် အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် တို့မှလည်း သီဆိုဖျော်ဖြေသွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Say “ Yes” at Chatrium – မင်းအတွက်ဆို အမြဲ “ Yes” Dream Wedding Fair 2020 မှာ စိတ်ဝင်စားသူ ဧည့်သည်တော်များအားလုံး `အခမဲ့´ တက်ရောက်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ခန်းများ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချမှုကို မတ်လ (၁၄) ရက်နှင့် (၁၅)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီမှ ည(၇)နာရီထိ Chatrium Grand Ballroom ၌လည်းကောင်း၊ Bridal Show Parade – မင်္ဂလာဝတ်စုံပြပွဲကို မတ်လ (၁၅)ရက် ညနေ(၆)နာရီတွင် Chatrium Pool Garden လည်းကောင်းခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပသွားမည်၍ လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါသည်။
ပွဲကျင်းပစဉ်ရက်အတွင်း Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ၏ Dream Wedding Packages များကိုလည်း ၁၅% အထူးလျှော့ဈေးဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး အတည်ပြု Confirmed booking ပြုလုပ်သွားမည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်သည့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင်
1.Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ၏တန်ဖိုးအကြီးဆုံး နှင့်တစ်ခန်းတည်းသာရှိသော (၁) ညလျှင် USD ၁၅၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ Royal Lake Suite အခန်းကြီးတွင် Royal Honeymoon Stay တည်းခိုခွင့်
2.ဘန်ကောက်၊ ငပလီနှင့် ဘားအံ့ တို့တွင် Honeymoon ခရီးသွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်
၃. Pre-Wedding ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်
အပါအဝင် အခြားဆုမဲပေါင်းများစွာကို ဆွတ်ခူးနိုင်မှာဖြစ်သောကြောင့် ချစ်သူများအနေဖြင့် လက်မလွှတ်သင့်သော အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်။
ချစ်ခြင်းများဖြင့် သင့်ပျံ့နေမည့် Say “ Yes” at Chatrium – Dream Wedding Fair 2020 အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် အစဉ်အမြဲ အဘက်ဘက်မှ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြသည့် Platinum Sponsor အဖြစ် Myanmar Been Sponsor များအဖြစ် Alpine နှင့် Forever One-stop Wedding Service & Planning၊ ပန်းများကို အခမ်းနားဆုံးအလှဆင်ပေးသည့် Floral Partner အဖြစ် His & Her Event and Wedding Studio ၊ Event Partner အဖြစ် Eternity Plus Media & Communications၊ Media Partner များအဖြစ် Kamayut Media နှင့် MNTV၊ Evening Bridal Show Parade တစ်ခုလုံးမှ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်များနှင့် Stars & Model International မှ အလှမယ်လေးများကို အလှပဆုံးဖြင့် မှုန်ခြယ်ပေးသွားမည့် Linn Linn (Makeup Artist)တို့ကို Chatrium Hotel Royal Lake Yangon မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Chatrium Dream Wedding Fair 2020 တွင် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဆိုင်ခန်းများလာရောက်ခင်းကျင်းပြသမည်ဖြစ်စေ၊ Sponsor အဖြစ် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးမည်ဖြစ်စေ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ၏ ဖုန်းနံပါတ် 01 9544500 (သို့) [email protected]သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး 25 ပုဒ်
Wedding Planing Tips 25 ပုဒ်
Update Events 10 ပုဒ်
Real Wedding4ပုဒ်
WILL YOU MARRY ME ? Wedding Promotion Week At Chatrium Hotel Royal Lake Yangon
ဇန်နဝါရီ 18, 2020 နေ့တွင်
Wedding Promotion Week At Chatrium Hotel Royal Lake Yangon
10th to 16th February 2020
ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း မင်္ဂလာပွဲကျင်းပဖို့ရန် စီစဉ်နေသော မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် Will YOU MARRY ME ? Wedding Promotion Week ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ရက်မှ ၁၆ရက်နေ့အထိ နံနက် (၉)နာရီမှ ညနေ(၅) နာရီအတွင်း ဟိုတယ်၏ Lobby Area ၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
Wedding Promotion Week ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ရက်မှ ၁၆ရက် နေ့အထိ လာရောက်ဘိုကင်တင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ၁၀% Discount ရရှိမှာဖြစ်တဲ့ အပြင် One –Stop Wedding Decoration Package နှင့်အတူ အခြားနှစ်လိုဖွယ်ရာ အထူးခံစားခွင့်များကိုပါ ရရှိမှာဖြစ်လို့ အခုပဲ မင်္ဂလာရက်မြတ် အမြန်ဆုံးရွေးချယ်ပြီး ဘိုကင်တင်နိုင်ဖို့ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါသည်။
Tea Reception Packages; Prices starting from USD 16 per person
Banquet Lunch or Dinner Packages ; Prices starting from USD 35 per person
မင်္ဂလာမောင်နှံများအနေနဲ့ WILL YOU MARRY ME ? Wedding Promotion Week ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်း 01 544500 လိုင်းခွဲ 6214 (သို့မဟုတ်) [email protected] သို့ အသေးစိတ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Wedding Package များအတွက် အသေးစိတ်ကိုလည်း Chatrium Hotel ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် https://www.chatrium.com/chatrium/royallakeyangon/weddings.html ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မီလီယာ ရန်ကုန်၏ အတွက် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
အောက်တိုဘာ 30, 2019 နေ့တွင်
ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို မီလီယာ ရန်ကုန်၏ Garbo Bar တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကံစမ်းမဲများ သည် မီလီယာရန်ကုန်တွင် မင်္ဂလာဆောင်နှင်းကြမည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် Wedding Promotion 2019 အနေဖြင့် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အစီအစဉ်တွင် မင်္ဂလာပွဲအတွက် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းသော မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲများ ကံစမ်းခွင့် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထူးဆုအနေဖြင့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ပွဲ ကဲ့သို့သော အမှတ်တရပွဲများ ကျင်းပရာတွင် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၊ ဒေါ်လာ ၇၀၀၊ ဒေါ်လာ ၅၀၀ စသည့် များအပြင် ဟိုတယ်တွင် တစ်ညတာ တည်းခိုခွင့် များ၊ ဘူဖေးညစာ သုံးဆောင်ခွင့်များနှင့် အခြားဆုမဲပေါင်းများစွာ ပါဝင်ပါသည်။
ပွဲသို့ အထူးဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များနှင့်တကွ မင်္ဂလာမောင်နှံ များ၊ မိတ်ကပ်ပညာရှင်များ၊ အဝတ်အစားဒီဇိုင်နာများ၊ မင်္ဂလာပွဲ စီစဉ်သူများမှ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆုမဲများကို လည်း အထူးဖိတ်ကြားထားသော မီဒီယာများရှေ့မှောက်တွင် ဟိုတယ်၏ တာဝန်ရှိသူများမှ ဖွင့်လှစ်ကြေငြာပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်တက်ရောက်လာသော ဧည့်သည်တော်များအတွက် Live Music ဖျော်ဖြေမှုများ ၊ စားသောက်ဖွယ်ရာများနဲ့ တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး အခမ်းအနား အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
လှပခမ်းနားသော မင်္ဂလာခမ်းမနဲ့ အတူ ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ အပြင် ယခုကဲ့သို့သောအထူး အစီအစဉ်ကောင်းများစွာဖြင့် စောင့်ကြိုလျက်ရှိသော မီလီယာ ရန်ကုန်၏ Ballroom ကြီးတွင် တစ်သက်တာ မမေ့နိုင်စရာ မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲလိုသည့် မင်္ဂလာမောင်နှံများ အနေဖြင့် မီလီယာ ရန်ကုန်၏ မြေညီထပ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Banquet Showroom သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ၍သော်လည်းကောင်း၊ 01 934500 သို့မဟုတ် [email protected] သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။
မဂၤလာရာသီအၾကိဳ မီလီယာ (Meliá Yangon) ရဲ႕ အထူးလက္ေဆာင္
ဇူလိုင် 26, 2019 နေ့တွင်
မဂၤလာပြဲတစ္ခုဆိုတာ မဂၤလာေမာင္ႏွံတစ္စံုအတြက္ အထူးအေရးပါတဲ့ အခမ္းအနားပြဲၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္… ခ်စ္သူကာလမွ ဇနီးေမာင္ႏွံအျဖစ္ ကူးေျပာင္းမယ့္ ဒီကာလေလးကို မဂၤလာေမာင္ႏွံတိုင္းက အျပီးျပည့္စံုဆုံး၊ အေကာင္းမြန္ဆုံးနဲ႔ အခမ္းအနားဆုံးေသာ မေမ့ႏုိင္စရာ ဘဝမွတ္တုိင္ တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔လိုၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္ … ဒီလိုလိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အိမ္မက္ေတြအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္…
မီလီယာရန္ကုန္ (Meliá Yangon) မွဒီလိုမဂၤလာေမာင္ႏွံေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝနားလည္ျပီး အေတြ႔အၾကဳံရွိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မဂၤလာေမာင္ႏွံတို႔ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ ရွိပါတယ္ … ခမ္းနားက်ယ္ဝန္းလွတဲ့ မဂၤလာခန္းမၾကီးထဲမွာ ေသသပ္လွပစြာ ျပင္ဆင္ေပးထားတဲ့ မဂၤလာအခမ္းအနား ျပင္ဆင္မႈအျပင္ ဝါရင့္စားဖိုမွဴးမ်ားရဲ႕ အေသးစိတ္စီမံေပးထားတဲ့မဂၤလာစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကလည္းမဂၤလာေမာင္ႏွံအတြက္စိတ္ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္မဂၤလာပြဲဆင္ႏႊဲဖို႔တစ္ခုသာက်န္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ျပီးျပည့္စံုေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္…
မီလီယာရန္ကုန္ (Meliá Yangon) မွာခမ္းနားေခတ္မီစြာ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ Ballroom ႏွစ္ခုျဖင့္ မဂၤလာပြဲမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိပါတယ္ … လူဦးေရ ၃၀၀ မွ စတင္ျပီး လူဦးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္အထိ တစ္ျပိဳင္တည္း တည္ခင္းႏိုင္ေသာ Grand Ballroom ၾကီးနဲ႔ လူဦးေရအနည္းဆံုး ၁၀၀ မွ ၂၀၀ ေက်ာ္ထိ တည္ခင္းဧည့္ခံႏိုင္ေသာ Inya Ballroom တို႔ျဖစ္ပါတယ္… ဒါ့အျပင္ မဂၤလာပြဲအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ခန္းမအတြင္းစင္ျမင့္၊ မဂၤလာ ေလွ်ာက္လမ္း၊ ခန္းမအဝင္ပန္းအျပင္အဆင္မ်ားလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္ျပီး ပေရာဂ်က္တာအခမဲ့ အသုံးျပဳခြင့္၊ မဂၤလာကိတ္ႏွင့္ မိတ္ကပ္ခန္းအသုံးျပဳခြင့္ေတြလဲ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္…
မဂၤလာပြဲလာ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္လည္း Tea Reception အေနနဲ႔ Package ၃ မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး Dinner Package အေနနဲ႔လည္း Package ၂ မ်ိဳးကို မဂၤလာေမာင္ႏွံမွ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ … မဂၤလာမိတ္ကပ္ႏွင့္ ဝတ္စံု၊ အခမ္းအနားမွဴး၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယို၊ တီးဝိုင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလို အၾကံျပဳ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္…
ၾကိဳတင္စီစဥ္ေနေသာ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ရာသီၾကိဳ အထူးလက္ေဆာင္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုလည္း မီလီယာရန္ကုန္ (Meliá Yangon) မွ ဖန္တီးေပးလိုက္ပါျပီ … ဇြန္လ၂၂ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ၂၂ ရက္အတြင္းမဂၤလာပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသူမ်ားအေနနဲ႔ အထူးဆု ေဒၚလာ ၁၀၀၀ အပါအဝင္ ေဒၚလာ၇၀၀၊ ေဒၚလာ၅၀၀စတဲ့Gift Voucher မ်ားကို ကံစမ္းႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးၾကီးကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္…
ဒါ့အျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လူဦးေရအတိုင္း ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းပါက မုန္႔၁မ်ိဳး အပိုထပ္ေဆာင္းေပးျခင္း၊ Premium Lake View (သို႔) Junior Suite မွာ တစ္ညတာတည္းခိုခြင့္၊ ယခင္အျမင့္ဆုံး Package မွာသာရရွိတဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ Pre Wedding ႐ိုက္ကူးခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ခံစားခြင့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ … ကံထူးရွင္မ်ားကို ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ပထမအပတ္ထဲတြင္ မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ျပီး မီလီယာရန္ကုန္ (Meliá Yangon) ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပေၾကျငာေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္…
ဒီလိုထူးျခားတဲ့ မီလီယာရန္ကုန္ (Melia Yangon) ရဲ႕ မဂၤလာလက္ေဆာင္ အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ကံစမ္းႏိုင္ဖို႔ မီလီယာရန္ကုန္ (Meliá Yangon) ရဲ႕ Banquet Showroom သို႔ အျမန္ဆုံးလာေရာက္ျပီး မဂၤလာေမာင္ႏွံတို႔ရဲ႕ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ မဂၤလာပြဲေလးအတြက္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္… အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မီလီယာရန္ကုန္ (Meliá Yangon) Banquet Showroom သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀၁-၉၃၄၅၀၀၀ (သို႔) [email protected] သို႕ ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္…
မင်္ဂလာရာသီအကြို မီလီယာ (Meliá Yangon) ရဲ့ အထူးလက်ဆောင်
မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုဆိုတာ မင်္ဂလာမောင်နှံတစ်စုံအတွက် အထူးအရေးပါတဲ့ အခမ်းအနားပွဲကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်… ချစ်သူကာလမှ ဇနီးမောင်နှံအဖြစ် ကူးပြောင်းမယ့် ဒီကာလလေးကို မင်္ဂလာမောင်နှံတိုင်းက အပြီးပြည့်စုံဆုံး၊ အကောင်းမွန်ဆုံးနဲ့ အခမ်းအနားဆုံးသော မမေ့နိုင်စရာ ဘဝမှတ်တိုင် တစ်ခုအဖြစ် မြင်တွေ့လိုကြမှာ သေချာပါတယ် … ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေ၊ အိမ်မက်တွေအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုတော့ လိုအပ်ပါတယ်…
မီလီယာရန်ကုန် (Meliá Yangon) မှဒီလိုမင်္ဂလာမောင်နှံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝနားလည်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများနှင့် အကောင်းမွန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါတယ် … ခမ်းနားကျယ်ဝန်းလှတဲ့ မင်္ဂလာခန်းမကြီးထဲမှာ သေသပ်လှပစွာ ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနား ပြင်ဆင်မှုအပြင် ဝါရင့်စားဖိုမှူးများရဲ့ အသေးစိတ်စီမံပေးထားတဲ့မင်္ဂလာစားသောက်ဖွယ်ရာများကလည်းမင်္ဂလာမောင်နှံအတွက်စိတ်အေးချမ်းစွာဖြင့်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲဖို့တစ်ခုသာကျန်တော့လောက်အောင် ပြီးပြည့်စုံစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
မီလီယာရန်ကုန် (Meliá Yangon) မှာခမ်းနားခေတ်မီစွာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Ballroom နှစ်ခုဖြင့် မင်္ဂလာပွဲများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါတယ် … လူဦးရေ ၃၀၀ မှ စတင်ပြီး လူဦးရေ ၆၀၀ ကျော်အထိ တစ်ပြိုင်တည်း တည်ခင်းနိုင်သော Grand Ballroom ကြီးနဲ့ လူဦးရေအနည်းဆုံး ၁၀၀ မှ ၂၀၀ ကျော်ထိ တည်ခင်းဧည့်ခံနိုင်သော Inya Ballroom တို့ဖြစ်ပါတယ်… ဒါ့အပြင် မင်္ဂလာပွဲအတွက် လိုအပ်တဲ့ ခန်းမအတွင်းစင်မြင့်၊ မင်္ဂလာ လျှောက်လမ်း၊ ခန်းမအဝင်ပန်းအပြင်အဆင်များလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ပရောဂျက်တာအခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်၊ မင်္ဂလာကိတ်နှင့် မိတ်ကပ်ခန်းအသုံးပြုခွင့်တွေလဲ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…
မင်္ဂလာပွဲလာ ဧည့်ပရိတ်သတ်များအတွက်လည်း Tea Reception အနေနဲ့ Package ၃ မျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Dinner Package အနေနဲ့လည်း Package ၂ မျိုးကို မင်္ဂလာမောင်နှံမှ စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်နိုင်ဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … မင်္ဂလာမိတ်ကပ်နှင့် ဝတ်စုံ၊ အခမ်းအနားမှူး၊ ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို၊ တီးဝိုင်းအဖွဲ့များကိုလည်း လိုအပ်သလို အကြံပြု ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
ကြိုတင်စီစဉ်နေသော မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် ရာသီကြို အထူးလက်ဆောင် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုလည်း မီလီယာရန်ကုန် (Meliá Yangon) မှ ဖန်တီးပေးလိုက်ပါပြီ … ဇွန်လ၂၂ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ၂၂ ရက်အတွင်းမင်္ဂလာပွဲအတွက် ကြိုတင်စာရင်းပေးသူများအနေနဲ့ အထူးဆု ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အပါအဝင် ဒေါ်လာ၇၀၀၊ ဒေါ်လာ၅၀၀စတဲ့Gift Voucher များကို ကံစမ်းနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကြီးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒါ့အပြင် သတ်မှတ်ထားသော လူဦးရေအတိုင်း ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းပါက မုန့်၁မျိုး အပိုထပ်ဆောင်းပေးခြင်း၊ Premium Lake View (သို့) Junior Suite မှာ တစ်ညတာတည်းခိုခွင့်၊ ယခင်အမြင့်ဆုံး Package မှာသာရရှိတဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ Pre Wedding ရိုက်ကူးခွင့်ပြုခြင်းနှင့် အခြားအခွင့်အရေးပေါင်းများစွာကိုလည်း ခံစားခွင့်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ကံထူးရှင်များကို ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာလ ပထမအပတ်ထဲတွင် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး မီလီယာရန်ကုန် (Meliá Yangon) ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြကြေငြာပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်…
ဒီလိုထူးခြားတဲ့ မီလီယာရန်ကုန် (Melia Yangon) ရဲ့ မင်္ဂလာလက်ဆောင် အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ဖို့ မီလီယာရန်ကုန် (Meliá Yangon) ရဲ့ Banquet Showroom သို့ အမြန်ဆုံးလာရောက်ပြီး မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးအတွက် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်… အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် မီလီယာရန်ကုန် (Meliá Yangon) Banquet Showroom သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ၀၁-၉၃၄၅၀၀၀ (သို့) [email protected] သို့ ဆက်သွယ်၍သော်လည်းကောင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်…
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 25, 2019 နေ့တွင်
Chatrium Hotel Royal Lake Yangon မှာ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဖြင့် တစ်သက်တာ မေ့မရနိုင်သော ပျော်ရွှင်မှု အမှတ်တရများပိုင်ဆိုင်ဖို့ ချယ်ထရီယမ်ဟိုတယ်၏ မုတ်သုံရာသီ အထူးအစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း လူကြီးမင်းတို့၏ စေ့စပ်ပွဲ၊ မော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ၊ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ၊ ညစာစားပွဲနှင့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ပွဲများအတွက် သာမက Weekdays ကြားရက်များတွင် ကျင်းပမည့်သူများအတွက် ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်၏ အထူးမေတ္တာလက်ဆောင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေး နှင့်အတူ အခြားနှစ်လိုဖွယ်ရာ အထူးအခွင့်အရေးများ စီစဉ်ပေးထားသောကြောင့် မင်္ဂလာရက်မြတ် ရွေးချယ်ပြီး ဘိုကင်တင်နိုင်ဖို့ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။ ယခု မုတ်သုံရာသီ အထူးမေတ္တာလက်ဆောင် အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်ထားပါသဖြင့် ဖုန်း 01 544500 လိုင်းခွဲ 6214 (သို့) [email protected] သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ booking တင်နိုင်ပါသည်။
Chatrium Monsoon Wedding Packages မင်္ဂလာဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်များဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။
Package အလိုက်ဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
Tea Reception @ Grand Ballroom
Lily Package USD 16.00 net per pax (ကြိုက်နှစ်သက်ရာမုန့် ၄မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ)
Lotus Package USD 17.00 net per pax (ကြိုက်နှစ်သက်ရာမုန့် ၅မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ)
Daffodil Package USD 18.00 net per pax (ကြိုက်နှစ်သက်ရာမုန့် ၆မျိုး၊ ရေခဲမုန့်၊ လက်ဖက်ရည်၊ကော်ဖီ)
Brunch Reception @ Grand Ballroom
Orchid Package USD 20.00 net per pax (Brunch Selection Menu)
Dinner/Lunch Reception @ Grand Ballroom (or) Pool Garden
Jasmine Package USD 33.00 net per pax (မြန်မာ (သို့) တရုတ်(သို့) နိုင်ငံတကာဘူဖေး)
Tulip Package USD 37.00 net per pax (မြန်မာ (သို့) တရုတ်(သို့) နိုင်ငံတကာဘူဖေး)
Red Rose Package USD 40.00 net per pax (မြန်မာ (သို့) တရုတ်(သို့) အနောက်တိုင်း(သို့) နိုင်ငံတကာဘူဖေး)
Package အားလုံးအတွက် အနည်းဆုံးလူဦးရေ ၂၈၀ မှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါ Package များသာမက စေ့စပ်ပွဲများ၊ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားများ၊ ကလေးမွေးနေ့ပွဲများ အတွက်လည်း လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် မီးနူးနှင့် ဧည့်ခံနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ အဆင့်မြင့်ပြီး ခမ်းနားထည်ဝါလှသော Chatrium Grand Ballroom တွင် လူဦးရေ ၄၀၀ အထိ တည်ခင်းနိုင်ပြီး Ngapli Pool Garden တွင် လူဦးရေ ၇၀၀ အထိ တည်ခင်းနိုင်ပါသည်။
မင်္ဂလာမောင်နှံတို့အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်ပရိတ်သတ်များကို အရသာကောင်းမွန် ပြည့်စုံလှသော အစားအသောက်များဖြင့် အထက်တန်းကျကျ တည်ခင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ဟိုတယ်၏ Pastry Chef Mr.Somboong မှ အမြင်တင့်တယ်လှပပြီး အရသာထူးခြားကောင်းမွန်သော Cake and Snack များကို တာဝန်ယူတီထွင်ပေးပြီး Lunch/ Dinner နှင့် Brunch Reception တို့အတွက် Western Chef Mr.Kosol နှင့် Chinese Chef Mr.Chichtichoch တို့မှ စေတနာ အပြည့်ဖြင့် ဆန်းသစ်ထားသော မီနူးများကို အကောင်းဆုံး အရသာခံစားမှုများဖြင့် စီမံချက်ပြုတ် တည်ခင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Chatrium Hotel Royal Lake Yangon မွာ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တစ္သက္တာ ေမ့မရႏိုင္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အမွတ္တရမ်ားပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ခ်ယ္ထရီယမ္ဟိုတယ္၏ မုတ္သံုရာသီ အထူးအစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပး လိုက္ပါသည္။
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေစ့စပ္ပြဲ၊ ေမာ္ကြန္းတင္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ၊ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ၊ ညစာစားပြဲႏွင့္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ပြဲမ်ားအတြက္ သာမက Weekdays ၾကားရက္မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္သူမ်ားအတြက္ ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္၏ အထူးေမတၲာလက္ေဆာင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေစ်း ႏွင့္အတူ အျခားႏွစ္လိုဖြယ္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား စီစဥ္ေပးထားေသာေၾကာင့္ မဂၤလာရက္ျမတ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘိုကင္တင္ႏိုင္ဖို႔ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္။ ယခု မုတ္သံုရာသီ အထူးေမတၲာလက္ေဆာင္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ထားပါသျဖင့္ ဖုန္း 01 544500 လိုင္းခြဲ 6214 (သို႔) [email protected] သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ booking တင္ႏိုင္ပါသည္။
Chatrium Monsoon Wedding Packages မဂၤလာ၀န္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။
Package အလိုက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
Lily Package USD 16.00 net per pax (ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာမုန္႔ ၄မ်ိဳး၊ ေရခဲမုန္႔၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ)
Lotus Package USD 17.00 net per pax (ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာမုန္႔ ၅မ်ိဳး၊ ေရခဲမုန္႔၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ)
Daffodil Package USD 18.00 net per pax (ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာမုန္႔ ၆မ်ိဳး၊ ေရခဲမုန္႔၊ လက္ဖက္ရည္၊ေကာ္ဖီ)
Jasmine Package USD 33.00 net per pax (ျမန္မာ (သို႔) တရုတ္(သို႔) ႏိုင္ငံတကာဘူေဖး)
Tulip Package USD 37.00 net per pax (ျမန္မာ (သို႔) တရုတ္(သို႔) ႏိုင္ငံတကာဘူေဖး)
Red Rose Package USD 40.00 net per pax (ျမန္မာ (သို႔) တရုတ္(သို႔) အေနာက္တိုင္း(သို႔) ႏိုင္ငံတကာဘူေဖး)
Package အားလံုးအတြက္ အနည္းဆံုးလူဦးေရ ၂၈၀ မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ Package မ်ားသာမက ေစ့စပ္ပြဲမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမ်ား၊ ကေလးေမြးေန႔ပြဲမ်ား အတြက္လည္း လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ မီးႏူးႏွင့္ ဧည့္ခံႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ၿပီး ခမ္းနားထည္၀ါလွေသာ Chatrium Grand Ballroom တြင္ လူဦးေရ ၄၀၀ အထိ တည္ခင္းႏိုင္ၿပီး Ngapli Pool Garden တြင္ လူဦးေရ ၇၀၀ အထိ တည္ခင္းႏိုင္ပါသည္။
မဂၤလာေမာင္ႏွံတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားကို အရသာေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုလွေသာ အစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ အထက္တန္းက်က် တည္ခင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ဟိုတယ္၏ Pastry Chef Mr.Somboong မွ အျမင္တင့္တယ္လွပၿပီး အရသာထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ Cake and Snack မ်ားကို တာ၀န္ယူတီထြင္ေပးၿပီး Lunch/ Dinner ႏွင့္ Brunch Reception တို႔အတြက္ Western Chef Mr.Kosol ႏွင့္ Chinese Chef Mr.Chichtichoch တို႔မွ ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ ဆန္းသစ္ထားေသာ မီႏူးမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အရသာခံစားမႈမ်ားျဖင့္ စီမံခ်က္ျပဳတ္ တည္ခင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
Chatrium Hotel Royal Lake Yangon တြင္ မဂၤလာေဆာင္ေသာ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ မဂၤလာခန္းမ အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္၊ မဂၤလာပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခမ္းအနားျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ပန္းအလွဆင္ျခင္းမ်ားကို လက္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မဂၤလာကိတ္၊ ေရခဲပန္းပုႏွင့္ ကားအလွဆင္ေပးျခင္း၊ ေနာက္ခံေတးသံသာ၊ မီးအလွျပင္ေပးျခင္း၊ ေကာ္ေဇာနီခန္းမတစ္ေလွ်ာက္ခင္းေပးျခင္း စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလဲ လက္ေဆာင္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
Chatrium ဟိုတယ္၏ ခန္းမမ်ားသည္ မဂၤလာေဆာင္ခန္းမအေနျဖင့္ သာမက မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ပြဲမ်ား၊ ကေလးေမြးေန႔မ်ားအတြက္လဲ အထူးသင့္ေလ်ာ္ၿပီး ဧည့္သည္အေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Chatrium ဟိုတယ္တြင္ မဂၤလာက်င္းပသည့္ မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ ကေလးေမြးေန႔မ်ားကို (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေစ်းေလွ်ာ့ေပးမည့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား လဲရရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ Package အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ Chatrium Hotel ၏ Honeymoon အခန္းတြင္ နံနက္စားအပါအ၀င္ တစ္ညတာတည္းခိုခြင့္၊ ေရခဲပန္းပု၊ ရွန္ပိန္ Fountain , Car decoration စသည္ျဖင့္ အျခားႏွစ္လိုဖြယ္ရာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားလည္း စီစဥ္ထားရွိေပးထားပါသည္။
Chatrium Monsoon Wedding Packages မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ အေသးစိတ္ စံုစမ္းေမးျမန္းလိုသည္မ်ားႏွင့္ ဘိုကင္တင္ရန္ အတြက္ မခင္ျမတ္သူ ဖုန္း 01 544 500 လိုင္းခြဲ 6214 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
The Gorgeous Luxury Lace ၏ The Biggest Sales Of The Year 2018
ဒီဇင်ဘာ 22, 2018 နေ့တွင်
✔️ 2018 ကို နှုတ်ဆက်ဖို့ December ရဲ့
THE BIGGEST SALE OF THE YEAR 2018 Program လေးကလဲ အရင်နှစ်တွေတုန်းကလိုပဲ တစ်နှစ်လုံးစာအတွက် နှစ်အကုန်မှာ Stock အကုန် ရောင်းပေးမယ့် အစီအစဉ်လေးပါပဲ …
ဒီနှစ်မှာ ထူးထူးခြားခြားလေး လုပ်ပေးမှာကတော့ ချစ်ရတဲ့ Customer တွေ မှတ်ရလွယ်စေဖို့အတွက် ..
အရည်အသွေးမြင့် Sequins နှင့် ပုလဲဇာများ အားလုံး 50% OFF
အရည်အသွေးမြင့် Brocade နှင့် Jacquard များ အားလုံး 50% OFF
အရည်အသွေးမြင့် #Sophie_Hallette Brand ပြင်သစ်ဇာစစ်စစ်များ အားလုံး 10% OFF
မြန်မာ့လက်ရက်ကန်း ပိုးစစ်အချိတ်ထည်များ အားလုံး 10% to 30% OFF
မြန်မာ့လက်ရက်ကန်း ပိုးဖဲအချိတ်ထည်များ အားလုံး 10% OFF
မြန်မာ့လက်ရက်ကန်း ပိုးဖဲကင်းတက်ပုဆိုးများ အားလုံး တစ်ကွင်း ၂၅ဝဝဝ ကျပ်
မြန်မာ့လက်ရက်ကန်း ပိုးစစ်ပုဆိုးများအားလုံး 10% OFF ဖြင့်ရောင်းချပေးသွားမှာပါ …
50% OFF ပေးထားတဲ့ Stock တွေထဲမှာ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း တကယ်တန်တဲ့
ဇာအမျိုးအစားအစုံ ရှိနေတဲ့အတွက် သတို့သမီးလေးတွေနဲ့ ပွဲတက်ချင်တဲ့ Customers လှလှလေးတွေအကုန်လုံး များများရွေးနိုင်ရင် ရွေးနိုင်သလို အများကြီးတန်တယ် ဆိုတာလေးကို
စိတ်ကူးမမှားစေဖို့ ထပ်မံအသိပေးပါရစေနော် …
(Stock ရှိသလောက်ကိုပဲ ရောင်းပေးမှာဖြစ်လို့ First come first serve စောစောလာရွေးလေ ပိုကောင်းတာတွေ ရမှာနော်)
ပြီးတော့ ဒီ Post လေးကို Public နဲ့ Share ထားပြီး ဆိုင်မှာလာဝယ်တဲ့အခါ ပြပေးရင်
လက်ဆောင်လေးတစ်မျိုးပေးဖို့လဲ စီစဉ်ထားသေးတယ်နော် … ဒီ အစီအစဉ်လေးကို 19 DEC 2018 မှ 31 DEC 2018 အထိ သတ်မှတ်ပြီး ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ချစ်ရတဲ့ Customers တွေနဲ့အတူ 2018 ကို နှုတ်ဆက်ရင်း လာမဲ့ 2019 မှာ လှပကျော့ရှင်းနေစေဖို့ The Gorgeous Luxury Lace ကိုအရောက်သွားကြဖို့ သတင်းကောင်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။
? အမှတ် ၃၃ ။ ကျောက်ကုန်းလမ်း
ရန်ကင်းမြို့နယ် ။ ရန်ကုန်မြို့
မနက် ၉:၃၀ မှ ည ၇:၃၀ အထိ ပိတ်ရက်မရှိပါ …
The Gorgeous Luxury Lace ရဲ႕ THE BIGGEST SALE OF THE YEAR 2018
Program ေလးကလဲ အရင္နွစ္ေတြတုန္းကလိုပဲ တစ္ႏွစ္လံုးစာအတြက္ ႏွစ္အကုန္မွာ Stock အကုန္ေရာင္းေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေလးပါပဲ …
ဒီႏွစ္မွာ ထူးထူးျခားျခားေလး လုပ္ေပးမွာကေတာ့ ခ်စ္ရတဲ့ Customer ေတြ မွတ္ရလြယ္ေစဖို႔အတြက္ ..
– အရည္အေသြးျမင့္ Sequins ႏွင့္ ပုလဲဇာမ်ားအားလံုး 50% OFF
– အရည္အေသြးျမင့္ Brocade ႏွင့္ Jacquard မ်ားအားလံုး 50% OFF
– အရည္အေသြးျမင့္ #Sophie_Hallette Brand ျပင္သစ္ဇာစစ္စစ္မ်ား အားလံုး 10% OFF
– ျမန္မာ့လက္ရက္ကန္း ပိုးစစ္အခ်ိတ္ထည္မ်ား အားလံုး 10% to 30% OFF
– ျမန္မာ့လက္ရက္ကန္း ပိုးဖဲအခ်ိတ္ထည္မ်ား အားလံုး 10% OFF
– ျမန္မာ့လက္ရက္ကန္း ပိုးဖဲကင္းတက္ပုဆိုးမ်ားအားလံုး တစ္ကြင္း ၂၅ဝဝဝ က်ပ္
– ျမန္မာ့လက္ရက္ကန္း ပိုးစစ္ပုဆိုးမ်ားအားလံုး10% OFF ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို့ သိရပါတယ္။
50% OFF ေပးထားတဲ့ Stock ေတြထဲမွာ ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း တကယ္တန္တဲ့ဇာအမ်ိဳးအစားအစံု ရွိေနတဲ့အတြက္ သတို႔သမီးေလးေတြနဲ႔ ပြဲတက္ခ်င္တဲ့ Customers လွလွေလးေတြအကုန္လံုး မ်ားမ်ားေရြးႏို္င္ရင္ ေရြးႏိုင္သလို အမ်ားႀကီးတန္တယ္ ဆိုတာေလးကိုစိတ္ကူးမမွားေစဖို႔ ထပ္မံအသိေပးပါရေစေနာ္ …
(Stock ရွိသေလာက္ကိုပဲ ေရာင္းေပးမွာျဖစ္လို႔ First come first serve ေစာေစာလာေရြးေလပိုေကာင္းတာေတြ ရမွာေနာ္)
ၿပီးေတာ့ ဒီ Post ေလးကို Public နဲ႔ Share ထားၿပီး ဆိုင္မွာလာဝယ္တဲ့အခါ ျပေပးရင္
ဒီ အစီအစဥ္ေလးကို 19 DEC 2018 မွ 31 DEC 2018 အထိ သတ္မွတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္လို႔ 2018 ကို ႏႈတ္ဆက္ရင္း လာမဲ့ 2019 မွာလွပေက်ာ့ရွင္းေနေစဖို႔ The Gorgeous Luxury Lace ကိုအေရာက္သြားဖို့ သတင္းေကာင္းေလးေပးလိုက္ပါတယ္။
? အမွတ္ ၃၃ ။ ေက်ာက္ကုန္းလမ္း
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
မနက္ ၉:၃၀ မွ ည ၇:၃၀ အထိ ပိတ္ရက္မရွိပါ …
ဩဂုတ် 1, 2018 နေ့တွင်
ဝါလကင်းလွတ်သီတင်းကျွတ်ရင်မင်္ဂလာရွှေလက်တွဲဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့ချစ်သူစုံတွဲလေးတွေအတွက်စိတ်ကူးထဲကန့ရက်လေးတစ်ရက်ကိုပီးပြည့်စုံစေဖို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်လမ်းနဲ့ဆရာစံလမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ခမ်းနားကျယ်ဝန်းလှပတဲ့ CBC မင်္ဂလာခန်းမကြီးကကြိုဆိုနေပါတယ်။
Hotel standard များနဲ့တူညီဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ service ဝန်ထမ်းများရှိတဲ့အတွက် CBC Ballroom မှာမင်္ဂလာပွဲတစ်ပွဲကိုပီးပြည့်စုံပြီးဧည့်သည်များစိတ်ချမ်းမြေ့စိတ်တိုင်းကျစေမယ့်ဝန်ဆောင်မှုတွေအပြည့်ရှိပါတယ်။
လူဦးရေ (၂၀၀) နဲ့အထက်အတွက် Package လးတွေစီစဉ်ပေးထားလို့နှစ်သက်ရာဈးနှုန်းနဲ့ Wedding packageေလးကိုစိတ်ကြိုက်ရွးချယ်လိုက်ပါနော်….
Wedding Packageေဈးနှုန်းလေးတွေကတော့ –
?Gold Package – လူတစ်ဦးလျှင်၇၀၀၀ကျပ် ( မုန့်၃မျိုး၊ေကာ်ဖီ/လက်ဖက်ရည်၊ေရခဲမုန့်)
?Platinum Package – လူတစ်ဦးလျှင်၈၀၀၀ကျပ် ( မုန့်၄မျိုး၊ေကာ်ဖီ/လက်ဖက်ရည်၊ေရခဲမုန့်)
?Diamond Package – လူတစ်ဦးလျှင်၁၀၀၀၀ကျပ် ( ဒံပေ / ေထာပတ်ထမင်း/ ကြက်ဆီထမင်း၊ေရခဲမုန့် )
– မင်္ဂလာခန်းမကျယ်ကြီးကို (၂) နာရီအသုံးပြုခွင့်၊
– မန်မာ (သို့) အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်နာက်ခံစာလုံးများ ရးပေးခြင်း၊
– Aircon နှင့် Lighting Arrangement တို့ပါဝင်ပါတယ်…….
CBC Ballroom မှာမင်္ဂလာဆောင်နှင်းကြမဲ့ေမာင်နှံတွေအတွက်အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ဟန်းနီးမွန်းလက်ဆောင်ေပးဦးမှာပါ
ရန်ကုန်နဲ့မနီးမဝေးကအရမ်းလှပြီး Romantic ဆန်တဲ့ေရွှပြည် Resort ကဘန်ဂလိုလေးမှာတည်းမလား၊
ကြင်စဦးမောင်နှံတွေေရွးချယ်လိုက်တဲ့ဟိုတယ်ရဲ့မင်္ဂလာအခန်းလေးမှာမနက်စာအပါအဝင် (၁) ညတာတည်းခိုခွင့်ေပးမှာပါနော်..
အထူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့ဩဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အတွင်းမှာ Booking လုပ်တဲ့ Couple တွအတွက်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ရဲ့ 15% ကြီးများတောင်ထပ်လျှော့ပေးဦးမှာမို့အမြန်ဆုံး Booking တင်လိုက်ကြတော့နော်..
09 44 55 66 036, 01 401480 ~ 87 Ext: 3022 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Cooperative Business Centre (ဗဟိုသမဝါယမအဆောက်အဦး – ယခင်ဆရာစံပလာဇာ)၊ (၅)လွှာ၊ဆရာစံလမ်းနဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်လမ်းထောင့်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ဖစ်ပါတယ်။
ွှThe One & Only Wedding Fair 2018
ဇူလိုင် 25, 2018 နေ့တွင်
PARKROYAL Hotel ၏ ဒုတိယမြောက် Wedding Fair ဖြစ်သော “ The One & Only – Mu Paing Shin” ပွဲအတွက် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ
PARKROYAL Hotel ၏ ဒုတိယမြောက် Wedding Fair ဖြစ်သော “ The One & Only – Mu Paing Shin” ပွဲအတွက် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့ တွင် PARKROYAL Hotel ၏ Yandanar Grand Ballroom တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဩဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့နှင့် ၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော အဆိုပါ Wedding Fair တွင် နောက်ဆုံးပေါ်မင်္ဂလာဝတ်စုံများကို မြင်တွေ့ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် မင်္ဂလာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများစွာ၏ အထူးအခွင့်အရေးများနှင့် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်များစွာ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ၎င်းအပြင် ဩဂုတ်လ ၅ရက်နေ့တွင် ပွဲအပ်နှံသော မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် PARKROYAL HOTEL မှ Wedding Package များဖြစ်သော –
-Sapphire Package (Three Snacks, Ice Cream, Tea and Coffee) 17 $ Net per person,
-Ruby Package(Four Snacks, Ice Cream, Tea and Coffee) 18 $ Net per person,
-Diamond Package (Five Snacks, Ice Cream, Tea and Coffee) 19 $ Net per person များ၏ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းသက်သာခွင့်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
PARKROYAL HOTEL ၏ General Manager Mr.Mark Losi မှ အဆိုပါ Wedding Fair သည် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး PARKROYAL Hotel အနေဖြင့်လည်း မင်္ဂလာမောင်နှံများအတွက် အမှတ်ရစရာပွဲတစ်ခုအဖြစ် အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
Myanmar Wedding Talk မှ တာဝန်ယူကျင်းပသော အဆိုပါပွဲတွင် Main Sponsor အဖြစ် Alpine , Diamond Sponsor အဖြစ် P.O.Q Myanmar Gems & Jewelry, Gold Sponsor အဖြစ် Aroma Wedding Studio, Co – sponsor အဖြစ် Myanmar Beer နှင့် Kingsman Photo Club တို့မှ ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါကြောင်းသိရပါသည်။
YES I DO Wedding Dress & Photo Studio ရဲ့2017 အတွက် ဝတ်စုံများ
ဇူလိုင် 18, 2017 နေ့တွင်
ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ ၂၀၁ရခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၈ရက်နှင့် ၉ရက်တို ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Love & Bliss Wedding Fair 2017 မှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ YES I DO (Wedding Dress & Photo Studio) ရဲ့ဖက်ရှင်ရှိုးကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော YES I DO (Wedding Dress & Photo Studio) ကို Susan’s Wedding (Myanmar) မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
Forever Wedding One Stop Service ရဲ့၂၀၁ရ အတွက် ဝတ်စုံများ
ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ ၂၀၁ရခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၈ရက်နှင့် ၉ရက်တို ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Love & Bliss Wedding Fair 2017 မှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ Forever Wedding One Stop Service ရဲ့ဖက်ရှင်ရှိုးကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော Forever Wedding One Stop Service ကို Susan’s Wedding (Myanmar) မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။